Ime ụlọ ịsa ahụ na China Faucet - Emebe ụlọ ịsa ahụ - Viga Faucet emeputa
Home Kachasị Fakpọsa Ahụ roomlọ Bathlọ Bathlọ Mara Mma Ime ụlọ ịsa ahụ na China Faucet
Ime ụlọ ịsa ahụ na China Faucet
Emechara: chụpụrụ Chrome
Dị nrụnye: Ewuola igbe
Oghere olulu: φ35mm
Tpye: Ime ụlọ ịwụ
Aka: Otu ugba
Ihe: 59% ọla
Cartridge: seramiiki, φ35mm
Akwụkwọ ikike: afọ 5
Dị ka ọkachamara Onye na-emepụta China, Pụrụ iche ụlọ ịsa ahụ maka ịsa ahụ maka ịsa ahụ ụlọ ịsa ahụ na-enweghị ihe ọhụụ emere na Chrome bụ nke viga mere na-ewu ewu mgbe niile na ndị na-azụ ahịa ịlele n'efu na ntinye okwu, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Factorylọ ọrụ VIN faucte ọhụrụ serie Coral serie ime ụlọ ịsa ahụ na-asa ahụ, a na-ere ọkụ a haziri ahazi na North America ahịa, afọ mmepụta karịa 10,000pcs site na ụlọ ọrụ. Sirial ọla kọfị, Sedal katrized, swiztland ika Neoperl areator, hụ na ịdị mma na ịdịte aka. Ahịrị ọcha na Ni etiri ihe kpuchie, na-eji ogologo oge. Nhọrọ kacha mma maka ụlọ elu eji eme ihe, 5 kpakpando ụlọ nkwari akụ. Welọ ime ụlọ dị elu ga-agbaghara Coral serie ma ọlị.
EGO VUTA FAUCET guzobere na 2008, n'ime afọ iri na abụọ gara aga, VIGA guzobere ezigbo mmekọrịta azụmahịa n'etiti ndị na-azụ ahịa, ndị na-ewu ụlọ, ndị na-ere ahịa na ụlọ mmepụta ihe karịrị mba 12. Azụ ahịa kachasị na Eourpe, North America, South America, Asia, wdg. Imepụta ngwaahịa dị elu na asọmpi, VIGA na-agbaso ebumnuche nke inye ndị ahịa ọrụ kacha mma na ezigbo ngwaahịa. Isi mmiri ịsa ahụ bụ ụlọ ịsa ahụ mgbe niile.
Ihe osise ezinụlọ Coral serie
Nhọrọ ụcha karịa
Tags:wares igwe na-agwakọta ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Mbụ: Lavatory Sink Faucets Na Chrome emeputa
Lavatory Sink Faucets Na Chrome emeputa
VIGA na-ere ụlọ decket n’elu ụlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie na chrome emechara 251100CH
Ọpụrụiche pụrụ iche ọla n’otu oghere oghere lever ime ụlọ ịsa ahụ na Chrome 8211A0CH